ဆောင်းရာသီမှာ အတူဆုံစည်းကြစို့ - Xinhua News Agency
၂၀၂၂ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရန် ၁၀ ရက်ခန့်သာလိုပါတော့သည်။ ယခု သီချင်းဗီဒီယိုမှာ “ဆောင်းရာသီမှာ အတူဆုံစည်းကြစို့” ဟုအမည်ရပြီး အိုလံပစ်အားကစားပွဲကို ဂုဏ်ပြုကာ တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (Xinhua)
The 2022 Beijing Winter Olympics is only about 10 days away. Click for Olympics-themed music video: Join Us in Winter. #Beijing2022